Xcode iyo Swift 3 ayaa lagu cusbooneysiiyay taageerada iOS 10 | Waxaan ka socdaa mac
Xcode iyo Swift 3 ayaa lagu cusbooneysiiyay taageerada iOS 10
Ignacio Sala | | Mac App Store, Barnaamijyada Mac
Sebtember 13 waxay ahayd maalintii ay xushay shirkadda ku taal Cupertino inay soo bandhigto nooca ugu dambeeya ee iOS 10, nooca hadda ku jira ku dhowaad 15% qalabka taageera. Laakiin bishii Sebtember 13, Apple sidoo kale waxay qaadatay fursad ay ku cusbooneysiiso cusbooneysiin cusub Xcode iyo Swift 3, iyaga oo la qabsanaya nooca cusub ee nidaamka hawlgalka ee iOS 10 aaladaha mobilada iyo kiniiniyada.
Laakiin kaliya maahan macruufka laakiin sidoo kale loogu talagalay nidaamka qalliinka ee Apple TV, tvOS 10, watchOS 3 iyo sida muuqata macOS Sierra. Xcode ayaa ah ikhtiyaarka ugufiican qofkasta oo raba inuu ka bilaabo jawiga barnaamijka Apple, maaddaama iyada aan ku abuuri karno isdhexgalka garaafka, abuuri karno koodh oo aan ka xusi karno, iyo sidoo kale inaan awoodno inaan qaadno tijaabooyinka kala duwan illaa inta uu arjiga si sax ah u shaqeynayo.
Cusboonaysiintaan cusub Xcode wuxuu gaarayaa nooca 8 oo leh wararka soo socda:
Tifatiraha ayaa awood u leh inuu soo saaro dukumiintiyo isla markaana muujiyo xariiqa shaqada ee aan kudareyno bixinta taageerada sawirada qaab ahaan .swift
Farta la adeegsaday ayaa loo beddelay San Francisco Mono oo mawduuc mugdi ah oo cusub ayaa lagu daray.
Khaladaadka aan helno marka aan khaldo arjiga way fududahay in la helo.
Bixiyuhu wuxuu ina tusayaa xiriirka ka dhexeeya walxaha kala duwan ee aan la shaqeyneyno.
Iyada oo tifaftiraha furaha aan wax ka beddeli karno awooda kordhinta.
Taageero ayaa lagu daray abuurista kordhino kaladuwan oo loogu talagalay arjiga farriinta nooca ugu dambeeyay ee iOS.
Waxaan ku dari karnaa kordhin si aan ula shaqeyno Siri, iMessage iyo istiikarada cusub ee arjiga farriimaha.
Maxaa ku cusub cusbooneysiinta la xiriirta Swift
API-yada dhammaan qaybaha oo ay ku jiraan qaabdhismeedka ku jira xirmada horumarinta ayaa la mideeyay.
Taageerida Goobaha Ciyaaraha, barnaamijkan cusub ee Apple ay ku soo saartay Apple kaliya iPad-ka isla markaana qof kasta oo adeegsada uu baran karo barnaamijka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Xcode iyo Swift 3 ayaa lagu cusbooneysiiyay taageerada iOS 10
Sayidkii siddooyinkii: Dagaalkii Waqooyiga ciyaartiisii, ayaa la iibinayaa wakhti xaddidan
Furashada iPhone 7 waxay muujineysaa inaad dooran karto badhanka Guriga